Qarax ka dhacay Muqdisho oo sababay dhimasho iyo dhaawac | Banaadir Times
HomeUncategorisedQarax ka dhacay Muqdisho oo sababay dhimasho iyo dhaawac
Ugu yaraan 2 ruux ayaa ku dhimatay qarax galabta ka dhacay Maqaayad ku taalla meel u dhow Isgoyska Sayidka ee Magaalada Muqdisho,waxaana qaraxaasi ka dhashay khasaaro iskuga jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed.
Dad ku sugan halka uu qaraxa ka dhacay ayaa waxa ay Mustaqbal u sheegen in qaraxa uu ahaa Ruux isku soo xirey wayaabaha qaraxa uu galay Maqaayad ku dhow Baar Bulsho,halkaas oo ay inta badan fariistaan dad u badan Ciidanka Dowladda,isla markaana uu isku qarxiyey.
Qara ayaa la sheegay in uu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo isugu Askar iyo dad Shacab ah,waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in dadka dhintey ay ku jirto Haweeney laheyd Maqaayadda.
Ciidamo ka tirsan kuwa amaanka ayaa goobta qaraxu ka dhacay gaaray waxa ayna xireen wadooyinka Soo gala iya oo halkaasi ka qaaday Dhaawacyada iyo Meydka ismiidaamiyihii is qarxiyay.
Gawaarida gurmadkadeg dega ayaa goobta gaaray waxa ayna soo qaadeen dhawacyada ka dhashay qaraxaase.
Previous articleNin udhintay Dawo uu damcay inuu kaga hortago Caabuqa Corono.
Next articleCaalamka oo wali ka qaylo dhaaminaya Corono-Virus